Ikhompyutha Amagciwane - ikhanda omkhulu kubasebenzisi abaningi. Ikakhulukazi ngenxa yokuthi kumele abhekane ekususweni yinoma iziphi izifo inikezwe. Namuhla, siyinake izothunyelwa igciwane ngokuthi Yxo.warmportrait.com. Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukukususa? Kanjani ukuthi kuziveza kukhompyutha yakho? Konke lokhu ngeke kudingeke ukuba izingane zifunde behluleka. Uma kungenjalo, ungase ulahlekelwe isistimu yakho yokusebenza noma enye idatha ebalulekile.
Yini ngokwayo limelela ukutheleleka sethu samanje? Leli phuzu kubaluleke kakhulu. Phela, kuncike kanjani ncamashi sizobe isinyathelo. Yxo.warmportrait.com (indlela bamsuse, siyowuqonda kamuva) - akulutho like the okuthiwa abaduni isiphequluli. "Ziyingozi" uhlobo iThrojani.
Veza lokhu ukutheleleka kukhompyutha yakho akunzima kakhulu. It ikhubaza kusiphequluli sakho. Ngenxa yalokho, kungenzeka shintsha ikhasi isiqalo. Plus, wena siyohlale izikhangiso ezintsha ithebhu ohlelweni. Ngisho noma ukuvikela ikhompyutha yakho uma kuqhathaniswa nogaxekile. Zonke lesi senzo Yxo.warmportrait.com. Indlela kokuyikhipha yesistimu yokusebenza? Uma ulungiselele kahle inqubo, lutho nzima ku akusiyo.
Sizoba ukuzama angabacwasi ngokushesha ukuwina ukutheleleka zethu zamanje. Isinyathelo sokuqala Kunconywa ukuthi ugcine yonke idatha yakho siqu ezibalulekile abezindaba esikhiphekayo. Ngezinye izikhathi kokukhipha igciwane kuholela ekulahlekelweni ulwazi lomsebenzisi. Hhayi ukhetho best.
Uvakashele Yxo.warmportrait.com? Indlela ukuqeda le ukutheleleka? Ukuze wenze lokhu, ukulungiselela isicelo ezikhethekile kuzosiza ekulweni negciwane. Anti - iphuzu lokuqala. Ungasebenzisa noma isiphi, ngokubona kwakho. Kodwa kungcono ukusizakala "Avast" noma Nod32. Njengoba inketho - Dr.Web. Kodwa okufanayo "Kaspersky" kufanele kugwenywe.
Iphuzu lesibili - wuhlelo ngomkhondo inthanethi spyware kwikhompyutha yakho. Lapha ukhetho best kuyinto ukulanda SpyHunter. Into yokugcina udinga ukuqeda igciwane, - isicelo ezokwenza ngokushesha ukuhlanza lokubhalisa kukhompyutha yakho. Perfect kulula ukusingatha CCleaner.
Empeleni, yilokho kuphela. Ungakwazi ngaphezu kwalokho ukuba zigcinelwe ukufakwa disk yesistimu yokusebenza. Ngezikhathi ezithile kokukhipha igciwane izophela izinyembezi ngenxa computer. Vele ukuzibonisa sikulungele.
Ngakho, sibhekene Yxo.warmportrait.com. Indlela ukususa le ukutheleleka unomphela? Yiqiniso, anti-virus software kungasiza lapha. Kodwa musa ukusheshe! Ngaphambi kwalokho, kufanele abheke izinqubo ababulawa yikhompyutha. Lapha, i-"okunqunyiwe" amagciwane, okubangela yokuhlanza ephelele uhlelo kusuka kube nzima kakhulu.
Shayela i-"Task Manager" bese uchofoza ku- "Izinqubo" ithebhu. Lapha kulapho amanga ukutheleleka zethu zamanje. Thola izinqubo Yxo.warmportrait.com. Indlela ukuzisusa? Kuqokonyiswa isikhombisi, bese ucindezela u- "Qedile" ekhoneni elingezansi kwesokudla isilawuli. Ingabe vela isixwayiso encane mayelana irreversibility yenqubo. Vumelana naye futhi liqalise imibono.
Ukulungele? Khona-ke singasinda siqhubekele phambili. Khumbula, ngaphandle lento, zonke ezinye izenzo kuyize. Lapho izinqubo ikhompyutha Kukhanseliwe, dlulelani esinyathelweni esilandelayo.
Okungukuthi, ukuze a shanela Imininingwane. Wena ahlala ku igciwane computer okuthiwa Yxo.warmportrait.com? Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukukususa? Lokhu kuzosiza ukuba izinhlelo ezikhethekile futhi kancane yokuhlakanipha yakho.
Isinyathelo sokuqala, uvule isiphequluli. Hamba lapho "Izilungiselelo" bese "Izicelo / Plugin". It ufuna ukususa amasevisi kanye nezinhlelo ukuthi ukukhonza ukuze azivikele ugaxekile kakhulu. Njengomthetho, isicelo ethandwa kakhulu kuyinto AdBlock. Uma isiphequluli sakho kususwa kuba anezele engadingekile, livale.
Manje ungaqalisa unqulo wesi arab. Yenza scan ezijulile hard disk ngodonga yakho. Ephambi kwezinduna abezindaba esikhiphekayo, akudingekile ukuba wawubaphuca ekucwaningeni - ukuvumela scan efanayo. Antivirus uzokunika imiphumela. Izindawo ezingaba izinto eziyingozi kufanele baphathwe inkinobho ekhethekile. Akubona bonke ukunqotshwa ukwelashwa. Insali ngokuphephile usongo.
Ngokulandelayo, ukusebenzisa SpyHunter. Ngu Isifaniso nge Antivirus avivinye. lapha kuphela zonke spyware Kutholwe angaphansi ukususwa besikhashana. Zonke ukulungele? Uma siqhubekela phambili.
Ukudlala ngemizwelo 'ebhukwini
Kulesi ekulweni Yxo.warmportrait.com uphela. Indlela ukususa igciwane kusuka kwikhompyutha yakho? It uhlala ukuze bafeze umsebenzi eyodwa kuphela - ukuhlanza ebhukwini yesistimu yokusebenza. Ngesandla liqalise it is hhayi Kunconywa - isixazululo ngokuvamile engalethi imiphumela.
Kunalokho, ukusebenzisa CCleaner ke ohlangothini lwesobunxele kuzoveza izilungiselelo scan. Ngaphansi isivivinyo kufanele uthole zonke ngodonga kwi-hard disk, iziphequluli, imidiya yakho esikhiphekayo. Ngokulandelayo, chofoza "Ukuhlaziywa", bese ku "Ukuhlanza". Emva kokuphothulwa kohlelo msebenzi ungenziwa ivalwe.
Yilokho. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukususa isiphequluli sakho bese faka. Iqalise ikhompyutha yakho bese nibheka yi. Uma kungenjalo, kuyodingeka kabusha uhlelo lokusebenza usebenzisa ukufakwa CD. Ayikho into enzima ngakho. Noma kunjalo, manje awesabi Yxo.warmportrait.com. Indlela ukukususa unomphela? Ukuze siphendule lo mbuzo ngoba wena ayisekho inkinga!
Kuyini ikhodi yephutha 43? Indlela yokulungisa?
Indlela ukususa kukhompyutha kusukela Yahoo Ukucinga Amathiphu
Shoes - zabesilisa ekwindla nasebusika onobuhle